သူတို့အာဘော် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 94
“ရန်သူအောင်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်း” ၀ီရသူ(မစိုးရိမ်) ။ ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ ယခုအခါ၌ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လျှင် မြန်မာ့နိုင်ရေးသည် အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျှားနေသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ သို့သော် လုံးလုံးလျားလျား စိတ်ချယုံကြည်ထိုက်သည့်အဆင့်သို့ မရာက်ရှိသေးပေ။ ဟိုယခင်က အလုံပိတ်ခံထားရ၍ အသံဗလံများ မကြားခဲ့ရသော်လည်း ယခုအခါ၌မူ အချို့အ၀က် ပွင့်သောတံခါးဆီမှ အသံဗလံများ ကြားနေရခြင်း ဖြစ်လေသည်။ လယ်သမားများထံမှလည်း ကြားနေရသည်။ အလုပ်သမားများထံမှလည်း ကြားနေရသည်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးထံမှလည်း ကြားနေရသည်။ အကျယ်လောင်ဆုံး အသံကား အလုပ်သမားတို့၏ အသံပင်တည်း။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတစ်ယောက်၌ ရှိသင့်ရှိထိုက်သော အရည်အချင်းများတွင် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော အချက်လေးချက်ကား စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်လေသည်။ ထိုအချက်လေးချက်မှာ (က) သစ္စာ ရှိရမည်။ (ခ) ...
ညွန့်ထွေးဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၂ (Moemaka file photos) သတင်းကြိုထွက်ခြင်း နေပြည်တော်က ပြုလုပ်နေသည့် ရာထူး အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းတချို့ ပြင်ပသို့ ကြိုတင်ပေါက်ကြားနေသည်။ ထိုသတင်းများအနက် ချောင်ထိုးခံထားရသည့် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင် နေရာကောင်းရလိမ့်မည်ဟူသော သတင်းလည်း ပါဝင်သည်။ No tags for this post.
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး ၁၃ ခေတ်သစ် နိုင်ငံရေးဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်သစ် ဆီသို့ မောင်ရစ်၊ ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၂ ဘယ့်နှယ် … ဘာလိုချင်လဲ … “ဒီမုိုကရေစီ” လို့ လည်ပင်းကြောကြီးတွေ ထောင်ထလာအောင် ကြုံးအော်ခဲ့သူတွေက အခုလိုမျိုး “ဘာလိုချင်လဲ” လို့ ဟိုဖက်ကလာမေးတော့ အသံလေး အောက်ချပြီး “မိဘတွေက အိုပြီမို့ အိမ်လေးတော့ ခဏပြန်ချင်လိုက်တာ …” လို့ ငိုသံလေးစွက်ပြီး ပြောနေတာမျိုးကတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်ရင် ကြံ့ဖွတ်ပေးတဲ့ အကယ်ဒမီလောက်တော့ ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဟဲဟဲ … ၀က်ဆိုက်တွေ၊ နွားဆိုက်တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေက ခေါင်းစဉ်တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် ပေးတတ်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အပေါ်က ခေါင်းစဉ်ကို ပြူးပြဲနေအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ မိုးမခ၀က်ဆိုက်ကို ဖတ်ရှုတဲ့ ပရိသတ်တွေဆီက...
ဗမာနိုင်ငံ နဲ့ မြန်မာလူမျိုး တူမောင်ညို။ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ ဆိုတာ လူမျိူးရဲ့နာမည် ဒေါက်တာသန်းထွန်း- မြန်မာသမိုင်းရှာတော်ပုံ စာအုပ် စာမျက်နှာ (၁၀၃- ၁၀၄) တွင် ယခုလိုဖေါ်ပြထားပါသည်။ “မြန်မာလို့ခေါ်ရင်အစပထမလူမျိုးကိုပဲခေါ်တာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်နေရာ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ မြန်မာတွေအနေကြာတော့ သူတို့နေတဲ့ နေရာကိုပါ မြန်မာစု၊ မြန်မာရွာ၊ မြန်မာပြည်လို့ခေါ်တယ်၊ မွန်ကျောက်စာ (ခရစ် ၁၁၀၂ ) ထဲမှာ မြန်မာ ကို မိရ်မာ (မွန်ကျောက်စာ ၉ခ/၄၂၊ဒီ ၂၄၊ အိပ်ခ်ျ ၁၂) လို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ ထိလိုင်မင် (၁၀၈၄ – ၁၁၁၃) လက်ထက် နန်းသစ် ဆောက်တဲ့ အခါ မွန်၊ ပျူနဲ့ မိရ်မာ လက်သမားတွေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။...
Page 94 of 100«1...9293949596...100»
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၂၇) https://t.co/IKAOndYRf2 https://t.co/4jk1Uqpuel about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း Jison – သမ္မတကြီးကောက်ထားတဲ့ စာရင်း https://t.co/4tYZhaI0Bk https://t.co/F7ieMyEpNc about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
အေးငြိမ်း ● စိတ်ပျက်စရာ မြန်မာစာရေးပုံ၊ ဘာသာပြန်ပုံနှင့် ကွန်ပြူတာ စာရိုက်ပုံများ https://t.co/cmGnZ0S72H https://t.co/6jFpASmyWW about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
နေလွဏ်းအိမ် ● အဖိုးတန်​စက္ကူ https://t.co/Feh4B4Ql6u https://t.co/NZB8HVg21y about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သော ပညာရေး https://t.co/cLO5wUemyO https://t.co/cfg2sbcyfP about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite